सूर्या लाइफ इन्सुरेन्सको ७०% हकप्रद आउंदै, अनुमति माग्न पुग्यो धितोपत्र बोर्ड !
ARCHIVE, MARKET WATCH » सूर्या लाइफ इन्सुरेन्सको ७०% हकप्रद आउंदै, अनुमति माग्न पुग्यो धितोपत्र बोर्ड !
काठमाडौं - सूर्या लाइफ इन्सुरेन्सले ७०% हकप्रद निष्कासन गर्ने भएको छ । बैंकले हकप्रद निस्कासन गर्नको लागि धितोपत्र बोर्ड पुगेको छ । इन्सुरेन्सले १०ः७ अनुपातमा ७९ लाख २३ हजार ३०० कित्ता हकप्रद बिक्री गर्न अनुमति मागेको हो । यो हकप्रदमा एनआइसी एसिया क्यापिटलले बिक्री प्रबन्धकको काम गर्ने भएको छ ।
यो इन्सुरेन्सले गत असार ३२ गतेको साधारण सभाबाट पारित १२% बोनसपछि कायम १ अर्ब १३ करोड १९ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको ७०% हकप्रद बिक्री गर्न लागेको हो । यो हकप्रद बिक्रीपछि पुँजी १ अर्ब ९२ करोड ४२ लाख ३० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।
प्रकाशित : Sunday, November 04, 2018